बलिउडका यी चर्चित हिरोइन जस्ले एक अर्काको नाम पनि सुन्न चाहदैनन् ! « Online Tv Nepal
बलिउडका यी चर्चित हिरोइन जस्ले एक अर्काको नाम पनि सुन्न चाहदैनन् !
Published :5June, 2018 7:27 pm
बलिउडका कतिपय अभिनेत्री एकअर्कालाई देखी सहँदैनन्। ‘टप अभिनेत्री’ बन्ने होडबाजीमा उनीहरूबीच ‘क्याट फाइट’ चलिरहन्छ। फिल्मका अफरदेखि ब्याइफ्रेन्डका कारण एकअर्कालाई मन नपराउने थुप्रै छन् बलिउडमा।
दीपिका – कट्रिना :
बलिउडकर्मीका अनुसार कट्रिनाकै कारण दीपिका र रणवीरको ब्रेकअप भएको थियो। छ वर्षका प्रेम सम्बन्धपछि अहिले कट्रिना र रणवीर पनि छुट्टिइसकेका छन्।